Fal argagax badan oo ka dhacay BAAY |
Fal argagax badan oo ka dhacay BAAY
Viagra Caps without prescription, lioresal online. Muqdisho (Somalimedia Online)- Warka ka imaanaya Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, ayaa sheegaya in Maleeshiyada Al shabaab ay gudaha Degmadaasi ku dileen Labo ruux beeraaley ah, balse ay ku eedeeyen inay yihiin Adeegayaal u shaqeeya Dowlada Federaalka Somalia.
Wararku waxa ay sheegayaan in labadaasi Ruux lagu kala magacaabi jiray Cali Buule iyo Ibraahim Axmed waxa ayna Toogashadoodu ay ka dhacday meel fagaaro ah oo ku taalla Degmada Diinsoor.
Maleeshiyada ayaa sheegay in labadaasi ruux ay ku heleen denbiyadii lagu soo eedeeyay, sidaa awgeedna ay xukunka ku fuliyeen.
Qaaliga Maxkamadda Al shabaab, ayaa sheegay in Eedeysane Ibraahim Axmed uu ahaa Askari halka Cali Buule uu isaguna ka tirsanaa Sirdoonka Dowlada Federaalka Somalia
Alshabaab ayaa qofkii iyaga ka tirsan oo ay ka shakiyaan iyo dadka shacabkaba xiliyada ay dilayaan ku eedeeya inuu yahay Basaas la shaqeeya Dowlada Federaalka, waxa ayna dadka Degmada Diinsoor laga soo xiganayaa in Labadaasi ruux ay kamid yihiin dadka Deegaanka ee aan lugta ku laheyn Siyaasadaha is bar-bar socda ee Dalka ka taagan.
C/llahi Yarow oo kamid ah dadka Deegaanka ayaa xaqiijiyay in labadaasi ruux ay ahaayen dhalinyaro Alshabaab ka diiday inay la shaqeeyaan, islamarkaana ahaa beeraaleey, hayeeshee dhiigooda lagu baneystay wado aysan muteysan.
Dhanka kale, Maleeshiyada Al shabaab ayaa la soo sheegayaa inuu ka dhex jiro Khilaaf baaxad weyn oo sababay in is rasaaseyn Horjoogayaal iyaga ka tirsan ay ku dhex marto Degmada Baraawe, waxaana muuqaneysa inay wajahayaan Dulaan xoogan oo uga imaanaya dhanka Ciidamada Dowlada.